DF Soomaaliya oo war deg-deg ah ka soo saartay dhallinyaradii lagu laayay deegaanka Gololey | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DF Soomaaliya oo war deg-deg ah ka soo saartay dhallinyaradii lagu laayay...
Muqdisho (Halqaran.com) – Dowladda Soomaaliya ayaa si kulul u cambaareysay falkii argagaxa lahaa ee ka dhacay deegaanka Gololey ee gobolka Shabeelaha Dhexe, oo lagu laayay 9 ruux oo shacab ah.
War kasoo baxay dowladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in Cadaaladda la horkeeni doono kuwii ka dambeeyay Xasuuqa Shacabka.
Sidoo kale, dowladda ayaa amartay in kiiskaan baaritaan deg deg ah lagu sameeyo.
Dhalinyaradaan la dilay ayaa ahaa Shaqaalaha Xarun MCH oo ku taalla deegaanka Gololeey, isla markaana shalay rag hubeysan ay deegaankaas ka afduubteen, isla markaana Khamiista maanta ah meydkooda laamiga deegaanka Gololeey la soo dhigay.
Dhalinyarada meydadkooda la soo dhigay deegaanka Gololeey ayaa waxaa kamid ah laba dhalinyaro ah oo caanka ahaa degmada Balcad, kuwaas oo lagu kala Magacaabi jiray Cabdirisaaq Cabdullaahi Qobleey iyo Cumar Xuuti Filfil.
Allaha u Naxariisto, Waa Meydadka 9-kii dhallinyaro ee lagu laayay deegaanka Gololeey ee duleedka Balcad